DHAGEYSO: Puntland oo ka hadashay dagaalkii ka dhacay Gaalkacyo, ciidamo badanna geysay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Puntland oo ka hadashay dagaalkii ka dhacay Gaalkacyo, ciidamo badanna geysay
DHAGEYSO: Puntland oo ka hadashay dagaalkii ka dhacay Gaalkacyo, ciidamo badanna geysay
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya, dagaal khasaaro dhimasho ah sababay oo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo maleeshiyaad hubeysan ku dhexmaray deegaanka Teegare ee galbeedka magaalada Gaalkacyo.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee dhinaca Puntland, Axmed Muuse Nuur oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in Xerada Ciidamada Puntland ee deegaanka Teegare ay weerar ku soo qaadeen xalay Saqdii dhexe maleeshiyaad hubeysan oo Burcad ah, hayeeshee ay Ciidamada iska difaaceen.
Axmed Muuse Nuur, ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii xalay uu ku dhintay hal Askari oo ka tirsan Ciidamada Puntland iyo ruux ka tirsanaa maleeshiyaadkii dagaalka soo qaaday.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee dhanka Puntland ayaa beeniyay Ciidamada weerarka soo qaaday inay ahaayeen Ciidan ka tirsan Galmudug, balse waxa uu sheegay inay ahaayeen maleeshiyaad hubaysan.
Maamulka Puntland ayaa Ciidamo badan gaysay xerada Ciidamada teegaro ee dhanka Galbeed kaga taallo Magaalada Gaalkacyo.
Si kastab ha’ahaatee, gaadiidka dagaalka Ciidamada Puntland ayaa subixii Axadda maanta lagu arkaayay Magaalada dhexdeeda, kuwaasi oo hawlgalo ka waday Magaalada.
dagaal ka dhacay duleedka Gaalkacyo